मान्छे एक दिनमा कति मिनेट अरुको कुरा काट्छ ? « Janata Samachar
मान्छे एक दिनमा कति मिनेट अरुको कुरा काट्छ ?
प्रकाशित मिति : 31 May, 2019 9:14 am
काठमाडौं । चाहे जोे जस्तो सुकै मानिसहोस् दिनमा एकपटक भएपनि आफ्ना अगाडि नभएको मान्छेको कुरा गरेकै हुन्छ ।
यसका लागि उनीहरुले ४सय ६७ मानिसमा अध्ययन गरेका हुन् । सहभागी सबैमा एउटा सानो पोर्टेबल रेकर्डर लगाइएको थियो र दुईदेखि पाँच दिनसम्म उनीहरुका सबै संवाद र अन्तरक्रियाहरु अध्ययन गरिएको युनिभर्सिटीले जनाएको छ ।
अध्ययनकी उपप्रमुख तथा विश्लेषक मेगान रोबिन्स भन्छिन्, ‘वास्तवमा हामीले अरुबारे गरिने अधिकांश कुराहरु नकारात्मक, सकारात्मक केही नहुने गरेको पाएका छौँ । अनुसन्धानपछि मानिसहरुले गसिप गर्दा प्रायः तटस्थ अभिव्यक्ति दिने वा ‘न्युट्रल’ रहने गरेको पाइएको हो ।’
पुरुषले भन्दा महिलाले धेरै गसिप गर्ने गरेको पाइएको हो तर उनीहरुको कुरा प्रायः न्युट्रल किसिमको हुने वा जानकारीमा आधारित विषयमा रहने गरेको बताइएको छ । जस्तै उनीहरुबीच भतिजीको कामका बारेमा वा साथीको क्यान्सर उपचार सम्बन्धि लगायत यस प्रकारका कुरा हुने गर्दछ । यता युवाहरुले भने वयश्कको तुलनामा बढी नकारात्मक कुरा गर्ने गरेको डाटाले देखाएको छ । त्यस्तै सेलिब्रेटीहरुका बारेमा मानिसले कमै कुरा गर्ने गरेको पाइएको हो जसलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ ।
अधिकांश मानिसहरु गरिब र अशिक्षितहरुले धेरै गसिप गर्ने गरेको विश्वास गर्दछन् तर अनुसन्धानले सो भनाइ गलत साबित गरेको छ ।
अनुसन्धानका अनुसार धनी र शिक्षितहरु नै अरुका बारेमा धेरै कुरा गरिरहेका हुन्छन् ।
अध्ययनकर्ताहरुले प्राकृतिक अवलोकनपछि निकालिएको यो निष्कर्ष वास्तवमै यस प्रचलित तर गलत बुझिएको व्यवहारबारे धेरैको धारणा परिवर्तन गराउने दाबी गरेका छन् । यो अध्ययन अघिल्लो महिना जर्नल ‘सोसियल साइकोलोजिकल एण्ड पर्सनालिटी साइन्स’ मा प्रकाशित थियो ।
के सलह नेपाल आउँछ ? यस्तो छ विज्ञको बुझाई
नेपाल जस्तो सानो देशमा यो सलह पस्यो भने यसले पार्ने क्षतिको कल्पना नै गर्न नसकिने
अचानक चमेरा जमिनमा झर्दै भकाभक मर्न थाले : परीक्षणका लागि स्याम्पल ल्याबमा
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरुवाती चमेराबाट मानिससम्म आइपुगेको अहिलेसम्मको अनुमान छ । यो विषयमा
दुर्घटनामा परेको जहाजको अवशेषमा भेट्टियो ५ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । पाकिस्तानको कराँची अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै दुर्घटनामा परेको पाकिस्तान एयरलाइन्सको जहाजको अवशेषमा झण्डै ५
जासूस भएको आशंकामा खुट्टामा रातो रंग पोतिएको परेवा पक्राउ
काठमाडौं । काश्मिरको कटुवा जिल्लास्थित गितादेवीको घरमा भेटिएको परेवा भारतीय प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।